သင့်မှာ ချစ်သူ ရှိသူဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ~ – santhit.com
သင့်မှာ ချစ်သူ ရှိသူဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ~
Khant Hein February 26, 2018 Relationship No Comments
သင့်မှာ ချစ်သူ ရှိသူဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ
အချစ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ဟာ အစပိုင်းမှာတော့ ချိုမြိန်လှတဲ့အရသာပေးတယ်…
လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို အဖော်ပြုနေလို့ မင်းရဲ့ ခံစားချက်တွေ မျှဝေခံစားပေးလို့ ရနေတယ်လို့ ခံစားရလေ့ရှိတယ်…
လူတစ်ယောက်ဟာ မင်းရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ အမြဲရှိနေတဲ့အတွက် အနည်းဆုံးတော့ မင်း အထီးကျန်မနေဘူး…
ချစ်နေတဲ့အတွက် ဘာဘဲလုပ်ရလုပ်ရ အတူရှိနေရင်ကိုဘဲ သာယာနေပါပြီ…
ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုက ပိုပိုရှိလာတဲ့အချိန်မှာ တဖက်သားရဲ့ အားနည်းချက်တွေ ပြစ်ချက်တွေကို မြင်လာပါတယ်…
ဒါနဲ့ ပြသနာတွေက တစ်ခုပြီးတစ်ခု စတင်လာပါတော့တယ်…
စိတ်ရှုပ်မှုတွေ ပင်ပန်းမှုတွေ ထွက်ပြေးချင်စိတ်တွေ စဖြစ်လာပါမယ်…
တချို့ကပြောကြပါတယ် အချစ်ဆိုတာ ကျောက်ခဲကောက်တာနဲ့ တူပါသတဲ့…
ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်မဲ့ ကျောက်ခဲတစ်လုံးကောက်ရနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးကြတယ်…
ဒါပေမဲ့လဲ ဘယ်အချိန်ကျမှ သင့်တော်တဲ့ကျောက်ခဲကောက်ရနိုင်မလဲဆိုတာ မသိကြပါဘူး…
သူက မင်းနဲ့ သင့်တော်ပေမဲ့ မင်းကကော် သူနဲ့ သင့်တော်ပါ့မလား?
အမှန်တကယ်မှာတော့ အချစ်ဆိုတာ ကျောက်သွေးတာနဲ့တူပါတယ်…
စစချင်းကောက်ရတဲ့အချိန်မှာ သိပ်ပြီး ဘ၀င်မကျပေမဲ့…
သိထားရမှာတစ်ခုက လူဆိုတာ အခြေအနေ အလိုက် တုန့်ပြန်တတ်ပါတယ်…
ပြောင်းလဲ ချင်စိတ်နဲ့ လုံ့လသာရှိမယ်ဆိုရင် အရာကိစ္စတွေတော်တော်များများကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်…
နေရာတကာသွားပြီး ကျောက်ခဲကောက်နေမဲ့အစား ကိုယ့်မှာရှိနှင့်ပြီးသားကိုဘဲ အရောင်တောက်ပလာအောင် သွေးတာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်…
လူ တော်တော်များများက နှလုံးသားတွေ အေးစက်လာတယ်လို့ ထင်မှတ်တတ်ကြတယ်…
အမှန်တကယ်မှာတော့ ၂ယောက်သားရဲ့ နှလုံးသားချင်းပိုမိုချိတ်ဆက်လာအောင် သွေးပေးဖို့ ပျင်းသွားကြတာပါ…
တကယ်လို့သာ လူတိုင်းဟာ စကားပြောရမှာ ပျင်းတယ်… နားထောင်ပေးရမှာ ပျင်းတယ်… ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ အရာလေးတွေကို လုပ်ပေးရမှာပျင်းတယ်… ကြင်နာဂရုစိုက်ရမှာ ပျင်းတယ်… တဖက်သားကို နားလည်မှုပေးရမှာ ပျင်းသွားမယ်ဆိုရင် ချစ်သူအချင်းချင်းဘဲ ဖြစ်စေ… လင်မယား အချင်းချင်းဘဲဖြစ်စေ… တနေ့တနေ့ တလှမ်းလှမ်း ပိုပိုဝေးသွားကြပြီး အသံတိတ်သွားကြမှာပါ…
ဒါကြောင့်မှတ်ထားရမှာက လန်းဆန်းတက်ကြွနေတဲ့အချစ်တွေမှာ သင့်တော်တဲ့ ပျိုးထောင် ပေါင်းနှုတ် ရေလောင်းပေးရပါတယ်… အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှာ ပျင်းရိနေလို့မရပါဘူး…
စုံတွဲလေးတစ်တွဲရှိပါတယ်… ရုံးဆင်းပြီးချိန်မှာ ညစာအတူစား… Shopping အတူထွက်ဖို့ ချိန်ထားကြတယ်…
ဒါပေမဲ့ ကောင်မလေးက ရုံးမှာ အစည်းဝေးရှိနေလို့ နောက်ကျသွားတယ်…
ကောင်မလေး မိုးထဲလေထဲမှာ အလောတကြီးနဲ့ ပြေးလာပေမဲ့ အချိန်နာရီဝက်လောက်နောက်ကျသွားပါတယ်…
သူ့ရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးက တော်တော်လေးစိတ်ဆိုးနေပြီး ကောင်မလေးကို ပြောပါတယ်…
နင်အမြဲနောက်ကျနေတာဘဲ… အခု ဘယ်မှာ သွားချင်စိတ် စားချင်စိတ်တောင်မရှိတော့ဘူး… နောက်တစ်ခါဆို ငါ နင့်ကို မစောင့်တော့ဘူး…
သူ့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာေ၀၀ါးသွားသလို ခံစားသွားရစေပါတယ်…
တစ်ချိန်တည်း တစ်နေရာတည်းမှာ နောက်အတွဲတစ်တွဲကလဲ သူတို့လို အဖြစ်အပျက်မျိုးနဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံနေရပါတယ်…
ကောင်မလေး အပြေးအလွှားရောက်လာချိန်မှာ နာရီဝက်နောက်ကျနေပါပြီ…
သူ့ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ပြောလိုက်တယ်… “နင်ကြည့်ရတာလဲ တော်တော်လေး ပင်ပန်းနေရှာပြီနဲ့တူတယ်နော်…”
ဆက်ပြီး ကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ စိုနေတဲ့ မိုးရေစက်တွေကိုသုတ်ပေးပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ်က အနွေးထည်ကိုချွတ်ပေးပြီး ကောင်မလေးအပေါ် ခြုံပေးလိုက်ပါတယ်…
READ အိုသွေးတွေရဲ့ ချစ်သူအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်
အဲဒီအချိန်မှာ ကောင်မလေး မျက်ရည်ကျလာပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ သူ့ မျက်ဝန်းပေါ်က စီးကျလာတဲ့မျက်ရည်ဟာ နွေးထွေးမှုအပေါင်းနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့မျက်ရည်ပါ…
အချစ်ဆိုတာ များသောအားဖြင့် ကျနော်တို့ရဲ့ အတွေးတစ်ချက်နဲ့ ပြုမူချက်လေး တစ်ခုပါဘဲ…
အချစ်ဆိုတာ သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းပါသလို အရေးကြီးတာက နောက်မကျဖို့ပါ…
အရာတော်တော်များများဟာ မင်းရဲ့ နှလုံးသား ပြောင်းလဲမှုပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်…
တစ်ယောက်ယောက်က မင်းကို ချစ်မိပြီး မင်းကလဲ သူ့အပေါ် ခံစားချက်လေးရှိနေပြီထားဦး…
မင်းသူ့ကို ရွေးချယ်မယ်လို့ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး…
ကျနော်တို့ ပြောလေ့ရှိတယ်… “ကိုယ်တကယ် အရမ်းအရမ်း ချစ်ရတဲ့သူတစ်ယောက်ရှာတွေ့မှဘဲ ချစ်သူထားတော့မယ်…” တဖက်သားက မေးလာတဲ့အချိန်… အရမ်းအရမ်း ချစ်ရတဲ့သူဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? ကိုယ့်ဖက်ကလဲ မပြောပြတတ်ဘူး… ဘာလို့လဲဆိုတော့ မင်းကိုယ်တိုင်ကလဲ မသိနေဘူး…
ဟုတ်ပါတယ်… ကျနော်တို့ဟာ ကိုယ်အရမ်းအရမ်းချစ်ရမဲ့လူတစ်ယောက်ကို ရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ်… ဒါပေမဲ့လဲ ရုတ်တရက် ပြန်စဉ်းစားလိုက်ချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လောက်ထိ ရိုးစင်းခဲ့သလဲဆိုတာ သတိထားမိတယ်… တကယ်လို့သာ မစခဲ့ဘူးဆိုရင် အဲဒီလူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လောက်ထိ ချစ်သလဲဆိုတာ ဘယ်သိနိုင်ပါ့မလဲ… အမှန်တကယ်မှာတော့… အရမ်းအရမ်းကို ချစ်ရတဲ့ ခံစားချက်ဆိုတာက ကိစ္စတော်တော်များများကို အတူကျော်ဖြတ်ပြီးမှ ရရှိလာတဲ့ ခံစားချက်လေးပါ… လူတိုင်းဟာလဲ ကိုယ့်စိတ်ထဲက မျှော်မှန်းထားတဲ့ တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းသော မှန်တဲ့လူကို ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ စိတ်ကူးကြလိမ့်မယ်… ဒါကြောင့်လဲ ကိုယ့်ဘေးမှာ ရှိတဲ့သူကို အသေးစိတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး… သူစောင့်စားနေတဲ့ အချိန်တော်တော်လေးတောင် ကြာနေလောက်ပါပြီ…
လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့အချိန်မှာလဲ… ၁၀ ပိုင်းမှာ ၈ ပိုင်းလောက်ဘဲ ချစ်ရင် အတော်ပါဘဲ… မျှော်လင့်ချက်နဲ့ စိတ်ကူးကတော့ ၇ ပိုင်း ၈ပိုင်းလောက်ထားပြီး ကျန်တဲ့ ၂ပိုင်း ၃ ပိုင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်ပါ… တကယ်လို့သာ မင်းက ဒီထက်ပိုပြီးချစ်မယ်ဆိုရင် တဖက်သားကို ပိုပိုပြီး လေးလံလာစေတယ်လို့ ခံစားရစေပါတယ်… ၂ ဖက်လုံး အသက်ရှူမ၀အောင်ဖြစ်လာရင် အချစ်မှာလဲ ပျော်ရွှင်စရာပျောက်ဆုံးလာပါလိမ့်မယ်…
နားလည်ပေးသင့်တယ်… ရှင်းပြဖို့လဲ လိုပါတယ်…
အမှားဝန်ခံသင့်တယ်… အမှားပြင်ဖို့လဲ လိုပါတယ်…
စဉ်းစားဆင်ခြင်ပေးသင့်တယ်… နားလည်မှုလဲ ပေးသင့်ပါတယ်…
လက်ခံသင့်တာ လက်ခံဖို့လိုပေမဲ့… အောင့်အီးခံစားနေဖို့မလိုပါဘူး…
အားပေးနှစ်သိမ့်ဖို့လိုပေမဲ့… အရှိန်အစော်လွှမ်းမိုးဖို့ မလိုပါဘူး…
အားပေးဖို့လိုပေမဲ့… အမိန့်ပေး ဖို့မလိုပါဘူး…
နှစ်သိမ့်မေးမြန်းပေးဖို့လိုပေမဲ့… စစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ မလိုပါဘူး…
စကားရှင်းအောင်ပြောဖို့လိုပေမဲ့… ယိုးစွပ်ပြစ်တင်ပြောဖိုို့တော့ မလိုပါဘူး…
တဖက်သားအတွက် တိတ်ဆိတ်စွာဆုတောင်းပေးဖို့လိုပေမဲ့… တဖက်သားကို အရာရာတောင်းဆိုနေဖို့တော့မလိုပါဘူး…
အလွယ်တကူ လက်တွဲဖို့ မဆုံးဖြတ်သင့်သလို… လွယ်လွယ်နဲ့လဲ လက်တွဲဖြုတ်ဖို့ မဆုံးဖြတ်သင့်ပါဘူး…
#သငျ့မှာ ခဈြသူ ရှိသူဖွဈစေ မရှိသညျဖွဈစေ
အခဈြဆိုတဲ့ခံစားခကျြဟာ အစပိုငျးမှာတော့ ခြိုမွိနျလှတဲ့အရသာပေးတယျ…
လူတဈယောကျက ကိုယျ့ကို အဖျောပွုနလေို့ မငျးရဲ့ ခံစားခကျြတှေ မြှဝခေံစားပေးလို့ ရနတေယျလို့ ခံစားရလရှေိ့တယျ…
လူတဈယောကျဟာ မငျးရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ အမွဲရှိနတေဲ့အတှကျ အနညျးဆုံးတော့ မငျး အထီးကနျြမနဘေူး…
ခဈြနတေဲ့အတှကျ ဘာဘဲလုပျရလုပျရ အတူရှိနရေငျကိုဘဲ သာယာနပေါပွီ…
ဒါပမေဲ့တဖွညျးဖွညျးခငျြး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျမှုက ပိုပိုရှိလာတဲ့အခြိနျမှာ တဖကျသားရဲ့ အားနညျးခကျြတှေ ပွဈခကျြတှကေို မွငျလာပါတယျ…
ဒါနဲ့ ပွသနာတှကေ တဈခုပွီးတဈခု စတငျလာပါတော့တယျ…
စိတျရှုပျမှုတှေ ပငျပနျးမှုတှေ ထှကျပွေးခငျြစိတျတှေ စဖွဈလာပါမယျ…
တခြို့ကပွောကွပါတယျ အခဈြဆိုတာ ကြောကျခဲကောကျတာနဲ့ တူပါသတဲ့…
ကိုယျနဲ့ သငျ့တျောမဲ့ ကြောကျခဲတဈလုံးကောကျရနိုငျဖို့အတှကျစိတျကူးကွတယျ…
ဒါပမေဲ့လဲ ဘယျအခြိနျကမြှ သငျ့တျောတဲ့ကြောကျခဲကောကျရနိုငျမလဲဆိုတာ မသိကွပါဘူး…
သူက မငျးနဲ့ သငျ့တျောပမေဲ့ မငျးကကျော သူနဲ့ သငျ့တျောပါ့မလား?
အမှနျတကယျမှာတော့ အခဈြဆိုတာ ကြောကျသှေးတာနဲ့တူပါတယျ…
စစခငျြးကောကျရတဲ့အခြိနျမှာ သိပျပွီး ဘဝငျမကပြမေဲ့…
သိထားရမှာတဈခုက လူဆိုတာ အခွအေနေ အလိုကျ တုနျ့ပွနျတတျပါတယျ…
ပွောငျးလဲ ခငျြစိတျနဲ့ လုံ့လသာရှိမယျဆိုရငျ အရာကိစ်စတှတေျောတျောမြားမြားကို ပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ…
နရောတကာသှားပွီး ကြောကျခဲကောကျနမေဲ့အစား ကိုယျ့မှာရှိနှငျ့ပွီးသားကိုဘဲ အရောငျတောကျပလာအောငျ သှေးတာက ပိုကောငျးပါလိမျ့မယျ…
လူ တျောတျောမြားမြားက နှလုံးသားတှေ အေးစကျလာတယျလို့ ထငျမှတျတတျကွတယျ…
အမှနျတကယျမှာတော့ ၂ယောကျသားရဲ့ နှလုံးသားခငျြးပိုမိုခြိတျဆကျလာအောငျ သှေးပေးဖို့ ပငျြးသှားကွတာပါ…
တကယျလို့သာ လူတိုငျးဟာ စကားပွောရမှာ ပငျြးတယျ… နားထောငျပေးရမှာ ပငျြးတယျ… ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားဖို့ အရာလေးတှကေို လုပျပေးရမှာပငျြးတယျ… ကွငျနာဂရုစိုကျရမှာ ပငျြးတယျ… တဖကျသားကို နားလညျမှုပေးရမှာ ပငျြးသှားမယျဆိုရငျ ခဈြသူအခငျြးခငျြးဘဲ ဖွဈစေ… လငျမယား အခငျြးခငျြးဘဲဖွဈစေ… တနတေ့နေ့ တလှမျးလှမျး ပိုပိုဝေးသှားကွပွီး အသံတိတျသှားကွမှာပါ…
ဒါကွောငျ့မှတျထားရမှာက လနျးဆနျးတကျကွှနတေဲ့အခဈြတှမှော သငျ့တျောတဲ့ ပြိုးထောငျ ပေါငျးနှုတျ ရလေောငျးပေးရပါတယျ… အခဈြဇာတျလမျးတဈခုမှာ ပငျြးရိနလေို့မရပါဘူး…
စုံတှဲလေးတဈတှဲရှိပါတယျ… ရုံးဆငျးပွီးခြိနျမှာ ညစာအတူစား… Shopping အတူထှကျဖို့ ခြိနျထားကွတယျ…
ဒါပမေဲ့ ကောငျမလေးက ရုံးမှာ အစညျးဝေးရှိနလေို့ နောကျကသြှားတယျ…
ကောငျမလေး မိုးထဲလထေဲမှာ အလောတကွီးနဲ့ ပွေးလာပမေဲ့ အခြိနျနာရီဝကျလောကျနောကျကသြှားပါတယျ…
သူ့ရဲ့ ခဈြသူကောငျလေးက တျောတျောလေးစိတျဆိုးနပွေီး ကောငျမလေးကို ပွောပါတယျ…
နငျအမွဲနောကျကနြတောဘဲ… အခု ဘယျမှာ သှားခငျြစိတျ စားခငျြစိတျတောငျမရှိတော့ဘူး… နောကျတဈခါဆို ငါ နငျ့ကို မစောငျ့တော့ဘူး…
သူ့ရဲ့ စိတျထဲမှာ သူတို့ နှဈယောကျရဲ့ အနာဂတျဟာ ဝေဝါးသှားသလို ခံစားသှားရစပေါတယျ…
တဈခြိနျတညျး တဈနရောတညျးမှာ နောကျအတှဲတဈတှဲကလဲ သူတို့လို အဖွဈအပကျြမြိုးနဲ့ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျကွုံနရေပါတယျ…
ကောငျမလေး အပွေးအလှားရောကျလာခြိနျမှာ နာရီဝကျနောကျကနြပေါပွီ…
သူ့ကောငျလေးက ကောငျမလေးကို ပွောလိုကျတယျ… “နငျကွညျ့ရတာလဲ တျောတျောလေး ပငျပနျးနရှောပွီနဲ့တူတယျနျော…”
ဆကျပွီး ကောငျမလေးရဲ့ မကျြနှာပျေါမှာ စိုနတေဲ့ မိုးရစေကျတှကေိုသုတျပေးပွီး သူ့ကိုယျပျေါက အနှေးထညျကိုခြှတျပေးပွီး ကောငျမလေးအပျေါ ခွုံပေးလိုကျပါတယျ…
အဲဒီအခြိနျမှာ ကောငျမလေး မကျြရညျကလြာပါတယျ…
READ #မေတ္တာစစ်တယ်မစစ်ဘူးဆိုတာ ...သူနွေးထွေးကြင်နာတယ်မကြင်နာဘူးနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာ
ဒါပမေဲ့ သူ့ မကျြဝနျးပျေါက စီးကလြာတဲ့မကျြရညျဟာ နှေးထှေးမှုအပေါငျးနဲ့ ပွညျ့နှကျနတေဲ့မကျြရညျပါ…
အခဈြဆိုတာ မြားသောအားဖွငျ့ ကနြျောတို့ရဲ့ အတှေးတဈခကျြနဲ့ ပွုမူခကျြလေး တဈခုပါဘဲ…
အခဈြဆိုတာ သညျးခံခှငျ့လှတျခွငျးပါသလို အရေးကွီးတာက နောကျမကဖြို့ပါ…
အရာတျောတျောမြားမြားဟာ မငျးရဲ့ နှလုံးသား ပွောငျးလဲမှုပျေါမှာ မူတညျနပေါတယျ…
တဈယောကျယောကျက မငျးကို ခဈြမိပွီး မငျးကလဲ သူ့အပျေါ ခံစားခကျြလေးရှိနပွေီထားဦး…
မငျးသူ့ကို ရှေးခယျြမယျလို့ သတျမှတျလို့မရပါဘူး…
ကနြျောတို့ ပွောလရှေိ့တယျ… “ကိုယျတကယျ အရမျးအရမျး ခဈြရတဲ့သူတဈယောကျရှာတှမှေ့ဘဲ ခဈြသူထားတော့မယျ…” တဖကျသားက မေးလာတဲ့အခြိနျ… အရမျးအရမျး ခဈြရတဲ့သူဆိုတာ ဘယျလိုမြိုးလဲ? ကိုယျ့ဖကျကလဲ မပွောပွတတျဘူး… ဘာလို့လဲဆိုတော့ မငျးကိုယျတိုငျကလဲ မသိနဘေူး…
ဟုတျပါတယျ… ကနြျောတို့ဟာ ကိုယျအရမျးအရမျးခဈြရမဲ့လူတဈယောကျကို ရှာတှလေိ့မျ့မယျလို့ ထငျတတျကွတယျ… ဒါပမေဲ့လဲ ရုတျတရကျ ပွနျစဉျးစားလိုကျခြိနျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို ဘယျလောကျထိ ရိုးစငျးခဲ့သလဲဆိုတာ သတိထားမိတယျ… တကယျလို့သာ မစခဲ့ဘူးဆိုရငျ အဲဒီလူတဈယောကျကို ဘယျလောကျထိ ခဈြသလဲဆိုတာ ဘယျသိနိုငျပါ့မလဲ… အမှနျတကယျမှာတော့… အရမျးအရမျးကို ခဈြရတဲ့ ခံစားခကျြဆိုတာက ကိစ်စတျောတျောမြားမြားကို အတူကြျောဖွတျပွီးမှ ရရှိလာတဲ့ ခံစားခကျြလေးပါ… လူတိုငျးဟာလဲ ကိုယျ့စိတျထဲက မြှျောမှနျးထားတဲ့ တဈရာ ရာခိုငျနှုနျးသော မှနျတဲ့လူကို ရှာတှနေို့ငျဖို့ စိတျကူးကွလိမျ့မယျ… ဒါကွောငျ့လဲ ကိုယျ့ဘေးမှာ ရှိတဲ့သူကို အသေးစိတျကွညျ့လိုကျပါဦး… သူစောငျ့စားနတေဲ့ အခြိနျတျောတျောလေးတောငျ ကွာနလေောကျပါပွီ…
လူတဈယောကျကို ခဈြမိတဲ့အခြိနျမှာလဲ… ၁၀ ပိုငျးမှာ ၈ ပိုငျးလောကျဘဲ ခဈြရငျ အတျောပါဘဲ… မြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ စိတျကူးကတော့ ၇ ပိုငျး ၈ပိုငျးလောကျထားပွီး ကနျြတဲ့ ၂ပိုငျး ၃ ပိုငျးနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ခဈြပါ… တကယျလို့သာ မငျးက ဒီထကျပိုပွီးခဈြမယျဆိုရငျ တဖကျသားကို ပိုပိုပွီး လေးလံလာစတေယျလို့ ခံစားရစပေါတယျ… ၂ ဖကျလုံး အသကျရှူမဝအောငျဖွဈလာရငျ အခဈြမှာလဲ ပြျောရှငျစရာပြောကျဆုံးလာပါလိမျ့မယျ…
နားလညျပေးသငျ့တယျ… ရှငျးပွဖို့လဲ လိုပါတယျ…
အမှားဝနျခံသငျ့တယျ… အမှားပွငျဖို့လဲ လိုပါတယျ…
စဉျးစားဆငျခွငျပေးသငျ့တယျ… နားလညျမှုလဲ ပေးသငျ့ပါတယျ…
လကျခံသငျ့တာ လကျခံဖို့လိုပမေဲ့… အောငျ့အီးခံစားနဖေို့မလိုပါဘူး…
အားပေးနှဈသိမျ့ဖို့လိုပမေဲ့… အရှိနျအစျောလှမျးမိုးဖို့ မလိုပါဘူး…
အားပေးဖို့လိုပမေဲ့… အမိနျ့ပေး ဖို့မလိုပါဘူး…
နှဈသိမျ့မေးမွနျးပေးဖို့လိုပမေဲ့… စဈဆေးမေးမွနျးဖို့ မလိုပါဘူး…
စကားရှငျးအောငျပွောဖို့လိုပမေဲ့… ယိုးစှပျပွဈတငျပွောဖိုို့တော့ မလိုပါဘူး…
တဖကျသားအတှကျ တိတျဆိတျစှာဆုတောငျးပေးဖို့လိုပမေဲ့… တဖကျသားကို အရာရာတောငျးဆိုနဖေို့တော့မလိုပါဘူး…
အလှယျတကူ လကျတှဲဖို့ မဆုံးဖွတျသငျ့သလို… လှယျလှယျနဲ့လဲ လကျတှဲဖွုတျဖို့ မဆုံးဖွတျသငျ့ပါဘူး…
Relationship တစ်ခု ခိုင်မြဲချင်ရင် ဒါလေးတွေ လိုက်နာပါ
← ​ဝေးသွားပြီးတဲ့​နောက်​ … သတိရတိုင်းအတိတ်​ကိုပြန်​လှည့်​ကြည့်​ပြီးတဲ့အခါ
သွေးလှူဒါန်းရတဲ့ ကုသိုလ်ကြောင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးတရားများ →